सत्र सालताका रोचक घिमिरे, भैरव अर्याललगायतको टोली साहित्यिक पत्रिका ‘रचना’ प्रकाशनको तयारीमा जुटिसकेको थियो । ‘रचना’लाई निरन्तर गुणस्तरीय रूपमा प्रकाशन गर्न सम्पादक रोचक एक जना भरपर्दा मित्रको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो किनकि जागिरे भैरवको साथ सहयोग उहाँलाई अपर्याप्त हुन्थ्यो । यही मेसोमा भैरवले अर्का साहित्यकार रमेश विकललाई रोचकसँग परिचय गराउनुभयो । त्यसपछि झन्डै पाँच दशकसम्म विकल र रोचकको मित्रता यसरी घनीभूत...
१६ वर्षपछि शिव र भुवन साथै
अभिनेता शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी करिब १६ वर्षपछि एकसाथ पर्दामा देखिनुहुने भएको छ । शिव र भुवन यसअघि २०६२ सालमा प्रदर्शनमा आएको सोभित बस्नेतको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘राजु राजा राम’मा सँगै देखिनुभएको थियो । १६ वर्षपछि फेरि निर्देशक सोभित बस्नेतले नै चलचित्र ‘डाँडाको वरपीपल’मा उहाँहरूलाई एकसाथ लिनुभएको हो ।
कोरोनाविरुद्ध मानवताको जित
कोरोना महामारीले विश्वलाई आक्रान्त पारेको डेढ वर्ष नाघिसक्यो । यस्तो विषम पस्थितिमा विश्वको सबभन्दा ठूलो खेलकुद मेला ओलम्पिक आयोजना गर्नु असम्भव जस्तै थियो । सन् २०२० मै हुनुपर्ने टोकियो आलम्पिक कोरोनाकै कारण एक वर्ष पछाडि त सारियो । तर विज्ञहरू नै एक वर्षपछि पनि यो ओलम्पिक हुनेमा आशावादी थिएनन् । यसबीच जब टोकियो ओलम्पिक आयोजना गर्ने भनियो अरू त अरू जापानी जनता समेत रुष्ट भए किनभने कोरोना त्रास जस्ताको तस्तै थियो...
देशको साहित्यिक, बौद्धिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सम्मानित नाउँ हो यदुनाथ खनाल । मुलुकले यदुनाथको उचाइको विराट प्राज्ञिक व्यक्तित्व प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै छ । यदुनाथमा संस्कृत र अङ्ग्रेजी शिक्षाको चाहिँदो ज्ञान थियो । जीवनका विषम परिस्थितिहरूसँग लड्दै–भिड्दै लेखन, अध्ययन र अध्यापन कलामा उच्च सफलता प्राप्त गर्नु यदुनाथको वैशिष्ट्य हो । उनले प्रबन्ध र समालोचनामा पाश्चात्य...
मैले सोधेँ माटोलाई के थामेर आयौ ? उसले मलाई उभ्याएर भन्यो हावा र पानीलाई ओरालेर आएँ ! सोधेँ पानीलाई